Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo ku xad-gudubka kala soocida awooda dowladdeed ee xeer-dejinta, fulinta iyo garsoorka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu ku dhaqaaqay tallaabo halis gelineysa jiritaanka dastuuriga ee hey’addaha dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana sameeyay xadgudubyo dastuurka ah.
Guddoomiye Xaashi oo soo saaray war-saxaafadeed, ayaa sheegay in Madaxweynaha uu jebiyay waajibkiisa dastuuriga ee ku cad qodobka 87-aad, kaas oo xeerinaya in Madaxweynaha u gudanayo waajibaadkiisa si waafaqsan Dastuurka KGM, isla markaana uu yahay ilaaliyaha mabaadii’da aasaasiga ah ee Dastuurka oo ay ka mid tahay kala soocidda seddexda awoodood ee Dowladda.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha uu ku xad-gudbay kala soocida awooda dowladdeed ee xeer-dejinta, fulinta iyo garsoorka sida ku cad qodobka 3-aad farqadiisa 4-aad ee Dastuurka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xeer madaxweyne ku saxiixay dib-u-dhigaya ansixinta wax-ka-beddelka Dastuurka kumeel-gaarka ah, maadaama la galay xilligii doorashooyinka dalka oo ay sii dhammaaneyso muddada xilhaynta Barlamaanka 10aad, ayna bilaabanayso muddo Xileedka Barlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Midowga Musharixiinta oo cambaareeyay caburin ay shegeen in ay isa soo tareyso oo ay dowladda ku heyso shacabka